musha UNITED UMAMBO FOOTBALL STORI Vatambi Vanotamba Yevatambi Declan Rice Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yese yeBhola Genius iyo inozivikanwa nezita racho "Declan". Our Declan Rice Childhood Story pamwe neS Untold Biography Facts inounza kwauri nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvika panguva ino. Kuongorora kunosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, mhuri yemhuri, nyaya yehupenyu musati mazita, kusimudzira mukurumbira nyaya, ukama uye hupenyu hwehupenyu.
Hungu, munhu wose anoziva kuti ndiye mutambi ane mikana yakawanda yehupenyu huri mberi. Zvisinei, vashomanana chete ndivo vanofunga nezve Declan Rice's Biography iyo inofadza chaizvo. Iye zvino pasina kunze kwekuita, ngatitangei.
Declan Rice Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- Upenyu Hwekutanga uye Mhuri
Declan Rice yakaberekwa musi we 14th musi waJanuary 1999 kuna baba vake, Sean Rice naamai Teresa Rice mu London, United Kingdom. Declan Rice inobva kuIrish inobva kuIrish uye iyo inogona kutorwa kubva kuna baba vaIreland vababa Margaret naJack vanobva kuDouglas, musha weCork muguta, Ireland. Pasi apa mutambi wechirwi uye baba vake vane rudo, Sean Rice.
Kuvonga kuna vanasekuru vake uye nekuti amai vake, Teresa, yakabva kuCo Longford kuIreland, Declan anotenda kuti ari wechipiri chizvarwa cheIrish muBrithani. Muchidimbu, Declan semunhu munhu wechiIrish asi ane mwoyo weBritish.
Declan Rice yakakurira nemudzimai, baba uye zvichida pasina hama kana hanzvadzi muKingston upon Thames. Semukomana muduku, pfungwa yekuzadzika yakauya pose apo kune bhora pamakumbo ake. Zvechokwadi, zvose zvipo zvishoma Declan vakakumbira vakauya mumhando yebhola. Mifananidzo yakadaro yemutambo yakabhadhara zvikamu.
Declan Rice Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- Basa Rokutanga Upenyu
Kuda kwaSclan kwebhokisi kwakamuona iye nevamwe vatsva vanyoresa pachikwata cheBlobal Football Academy mushure mokuedzwa kwakabudirira. Akanga ari mumwe wevakomana vashomanana vakasarudzwa nemudzidzi munguva yekukwikwidzana, imwe nguva Chelsea FC yakangoshandurwa neRussian Billionaire, Roman Abramovich.
Gore iroro 2006, Declan's work foundation yakarongedzwa semakore manomwe. Yakanga iri nguva inofadza kune mhuri yeRuyi iyo yakaona mwanakomana wavo achipinda mujaya ruoko rwechikwata chakangodzokororazve Jose Mourinho.
Declan Rice Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- Mugwagwa Unoenda Mukurumbira
Chelsea FC academy upenyu haisi nyore panguva iyoyo. Nemhaka yeiyo chete, vana vakaoma zvikuru ndivo vakapona kuburikidza nesangano. Kungofanana nevamwe vatambi vechikoro, kusachengeteka ndiyo dambudziko guru raDeclan Rice iro rakaona boka rake-vakaroorana sevadzivisi vake. Akarwisana uye akawana mikana miduku iyo inomubatsira kuti afambire mberi kusvika kumakore akwegura. Declan yakafambira mberi kuburikidza nemakore akawanda kusvikira awana Chelsea isingakanganwiki mukukwikwidza zvikuru pasi pe14 team.
Declan Rice yakanga iri pakati pevamwe vana vashoma vakazviona ivo vachirwisana mumhepo yakagurwa-throat Chelsea FC munguva yake pasi pemakore 14. Zvinosuruvarisa, Declan murombo aisakwanisa kurwisana nechisimba uye izvi zvakaburitsa migumisiro yakawanda. Akasunungurwa neCallet academy uyo akamuona sechinhu chinopfuura chekudiwa.
Gore iroro, 2014 yaiva Gore Declan Rice yakatarisana nekuora mwoyo sechidiki chinoda hodhi yebhola. Pasina mubvunzo, chero mwana wemutambo ane akararama kuburikidza nekurasikirwa kwechikoro achangonyatsoziva zvakanyanya kurwadziwa kwepfungwa nekukuvadza zvinokonzera mupfungwa zvinogona kukonzera. Nabil Fekir akabatwawo zvakafanana.
Pasinei neChristian Academy rejection, zvinosarudzwa kusvikira zvichishanda. Mugore iroro 2014, Declan akadanwa neChikamiro cheWest Ham United pamushumo. In West Ham, Declan yakawanikwa nyaradzo kubva pane zvaainge achinetseka.
Declan Rice Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- Simuka Mukurumbira
Upenyu Huri nani mumugwagwa unozova Pro:
Pana 16 December 2015, gore rinopfuura mushure mokunge aenda kuWes Ham youth, Rice yakasimbisa chibvumirano chake chekutanga chekambani nekambani ndokutanga kushamwaridzana nekambani yeU23 team. Iyi ndiyo nguva yaakatanga kubudirira. Yokutanga yakauya pa 10th yaNovember 2017 apo Rice yakagamuchira PL2 mutambi wemwedzi waOctober, 2017.
Musi waMarch 2018, Rice yairemekedzwa nemutungamiriri weU19 wegore. Izvi zvakamupa tikiti yakakura yeketi.
Declan's start for the Hammers received him the man of the match. Maererano nebhokisi;"Yaiva nguva yekuzvikudza zvikuru kwandiri uye nemhuri yangu. Rudo rukuru kuna baba vangu vakauya nenzira yose kuti vauye uye vatarise, vanokuda. "
MunaApril 2018, Declan Rice akapiwa zita semushamisi-weChikwata che 2017-18 yegore. Marko Arnautović. Pasinei nokurasikirwa naye, Rice yakachengetwa imwe mubairo weiyo nyundo yegore yegore rechipiri rinomhanya.
"Ndakadzoka pano mushure mekunge ndasunungurwa naChristian kuChnUMX uye makore mashanu gare gare ndiri kutamba West Ham muLigeria League," "akadaro Rice uyo akasunungurwa naCentral pazera re14.
Zuva reSvondo raiva zuva rekupenga uye rimwe rakagadzira Declan Rice mhuri yakanyanyozvikudza pamusoro pezvaakabudirira. Murairi akashandisa mukana uyu kuti aratidze kuBellani kuti akanaka sei. Akaita chirevo kune kechikwata uye akafara kwazvo nekushanda kwake.
Pana 23 December 2018, Rice yakaita kuti 50th kuonekwa kwaWest Ham. Akava mutambi wokutanga kuita izvozvo achiri achiri kuyaruka achirova Michael Carrick's rekodha. Mushure mekuona chido kubva kuMan City, West Ham akasarudza kumupa chibvumirano chitsva kusvikira 2024 nechisarudzo chegore rinowedzera. Izvozvo zvinoreva mhepo zvakabatwa muvhidhiyo iri pasi apa;
Declan Rice Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- Ukama Hupenyu
Declan Rice ndomumwe munhu akawana rudo mumakore ake ekuyaruka. Akasarudza kuva neukama pamwe nemumwe mukomana wechidiki achiita kuti zvive pachena kunyange kumasangano ehupfumi.
Kusiyana nevana vaduku vaduku, kuita hukama hwevanhu vose haisi pfungwa yakanaka zvakadaro tichifunga kuti kuongorora kwakadaro kunogona kuchinja mabasa avo vaduku. Izvi, zvisinei, hazvisizvo zvakaitika kuna Declan Rice uyo atoziva chikafu iye akaumbwa. Pamberi penyeredzi yebhola, kune ngoro inonakidza muzita raLauren Fryer uyo ari muzera rimwe chete nemukomana wake.
Murairi ndeworudo rwemunhu anogona kuimba nziyo dzorudo kumusikana wake, nyora nhetembo, pikicha mifananidzo uye zvinonyanya kukosha, ita rwiyo rwiyo rwiyo mavhidhiyo azere nerudo rwemifananidzo yake uye Lauren Fryer. Pasi pane imwe yemavhidhiyo akadaro.
Declan Rice Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- Lifestyle
Pamberi pe 28th yaDecember, 2018, Declan akawana peanut ye £ 3,000-a-week chete. Senguva yekunyora, anowana £ 30,000-a-week iyo inoreva kuti kuchinja mararamiro.
Declan Rice Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- Untold Facts
Taura pamusoro pokubatana neWest Ham academy, Declan akava muchengeti uye fan of Pablo Zabaleta uyo akatamba muMan City panguva iyoyo.
Kutaura nezvekuyemura kwake Argentina, akambotaura ...; "Ndakanga ndiri mutambo wePablo mu2014. Kubva kune Fan, ndakava shamwari yake pamwe naye
Declan Rice Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- Upenyu hwehupenyu
Kuziva upenyu hwaDeclan Rice huchakubatsira kuti uwane mufananidzo wakazara wake.
Declan mumwe munhu ane chimiro chemukati chekusununguka chakaita kuti aite kufambira mberi kukuru muupenyu hwake hwega. Kubudiswa nechechi yeCallectic FC yakavakwa muna Declan kuti mafungiro akaoma uye kuranga zvinoratidza nzira yake yemazuva ano.
CHOKWADI CHINOGONA: Tinokutendai nekuverenga Declan Rice Childhood Indaba pamwe neSepold Biography Facts. At LifeBogger, isu tinoedza kururamisira uye kusaruramisira. Kana ukawana chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka, tapota shandisa nesu nekupindura pasi apa. Tichagara tichikoshesa uye tichiremekedza pfungwa dzako.
Les Roberts Ndira 12, 2019 Pa 6: 22 pm
Taurirai, mukwazisa pamusoro pekuisa chinangwa chako chekutanga nhasi. Kukweva chinangwa, uye basa rakanaka riri pamakadhi.
(Ndapota tamba kuEngland). lol.
Izvo zvishoma, handina kurashikirwa nababa vako makore mashomanana adarika, uye ndinoda kumubata, murume anofadza zvikuru wandakaonana naye muupenyu hwangu.
Kana iwe uchigona kumurega azive kuti iyo plumber kubva ku-phps mazuva inotumira zvakanakisisa, ndingadai ndichionga nokusingaperi.
Haisi chinhu chine mapuranga, ndinovenga westham, ndiri mupenyu qpr fan Lol, kungoseka chete.
Mutsa wakanaka, Les Roberts.
William Vaughan Kurume 29, 2019 Pa 12: 13 am
Baba vaCarlan, Sean, vangayeuka kutamba muchechi yedu yechikoro apo aive 11?
Takakunda 'kapu' kutamba paMambo wekare weBurton Road.